Sony na-aga n'ihu na-arụ ọrụ na OLED na TV ya 2018 | Akụkọ akụrụngwa
Sony bụ ụlọ ọrụ a ma ama maka ọtụtụ ebumnuche, ogo nke ihe ya na akụrụngwa ya, yana nke ejiri mara njirimara minimalist, nyere ya ohere itinye onwe ya dị ka nnukwu ngwa ahịa eletrọniki. O sina dị, nke nta nke nta ọ na-efunahụ ala n'ọtụtụ ebe ọ bụ onye ndu a na-enweghị mgbagha: Ekwentị; Foto na ụda; Foto…
Ọ bụ ya mere ha ji arụsi ọrụ ike iji wughachi ezigbo ngwaahịa ngwaahịa na nke kachasị mma. N'oge 2018 CES a Ha egosiputa igwe onyonyo ohuru ha nke 2018, nke kachasi na Android TV, teknụzụ HDR 10 na n'ezie usoro OLED.
Nke a bụ otú ha si hapụ anyị ka anyị bịaruo ogwe OLED 55 na nke 65 nke anụ ọhịa nke kachasị, mana ogwe aka ha abụghị naanị atụmatụ iji gosipụta, nke ahụ bụ na ha ejiri obi ọma chetaara anyị na Smart TV ha na-arụ ọrụ na gam akporo TV, usoro ihe mepere emepe kachasị emeghe ma na-ekpuchi ọtụtụ ohere, n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ Samsung's Tizen na-egosi ọkụ ma dị irè karị maka ọrụ ndị a na-eme kwa ụbọchị. Otú ọ dị, ụda abụwo mgbe nile akụkụ nke ụlọ ọrụ Japan ga-eme ka ọ pụta ìhè, nke a bụ otú ha si emesi anyị obi ike na telivishọn ha ga-esonyere usoro 3.1 Crystal Sound, ndị ọkà okwu agakwaghị abụ isi okwu telivishọn.
Igwe onyonyo ndị a nwere mkpebi 4K na HDR 10 n'ezie ga-adị n'etiti 5.500 na 6.500 euro, adabaghị maka akpa niile, mana maka ọtụtụ gourmets, kedu ka ọ ga - esi bụrụ eziokwu, eziokwu. Otú ọ dị, ọnụahịa dị ọnụ ala aha ya bụ XF90 ga - ebido n'etiti 49 na 85 sentimita asatọ, ha niile nwekwara gam akporo TV, Dolby Vision HDR na Google Assistant, na-enweghị obi abụọ ọ bụla anyị nọ n'ihu televishọn nke ọdịnihu. Anyị ga-ahụ ka ndị mmadụ si aza.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Sony na-aga n'ihu na-arụ ọrụ na OLED na TV ya 2018
Fisker E-motion, onye na-agba ọsọ maka Tesla